Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Hotels ENew South Wales I-Batemans Bay
IBatemans Bay yidolophu ekwimimandla yoNxweme olusezantsi kwiphondo laseNew South Wales, e-Australia. IBatemans Bay ilawulwa libhunga le-Eurobodalla Shire. Le dolophu ime kunxweme lwe-echweba elakhiwe apho umfula iClyde udibana noLwandlekazi lwePasifiki. IBatemans Bay ikwiNdlela iPrinces Highway (Highway 1) malunga neekhilomitha ezingama-280 (i-170 mi) ukusuka eSydney kunye ne-760 km (470 mi) ukusuka eMelbourne. ICanberra ibekwe malunga ne-151 km (94 mi) ngasentshona yeBatemans Bay, ngeKing Highway. Kubalo bantu lwango-2016, iBatemans Bay yayinabemi abayi-11,294. Indawo enkulu yedolophu ejikeleze iBatemans Bay ikwabandakanya i-Long Beach, iMaloneys Beach kunye nonxweme olusinga kumazantsi eRosedale lwalunabantu abayi-16,485 ngeyeSilimela ngo-2018. Yeyona dolophu iselunxwemeni lolwandle eCanberra, eyenza iBatemans Bay yindawo yeholide eyaziwayo kubahlali Ikomkhulu leLizwe lase-Australia. IJografi, ikummandla ekude we-Sydney Basin. IBatemans Bay ikwayindawo yokuphumla edumileyo, kodwa sele iqalile ukutsala iintsapho ezincinci ezifuna izindlu ezifikelelekayo kunye nendlela yokuphila yolwandle ehlaziyiweyo. Amanye amashishini asekhaya abandakanya ukulima iimbatyisi, amahlathi, ukhenketho lwe-eco-kunye neenkonzo zokuthengisa.
INew South Wales (isifinyeziweyo njenge-NSW) sisizwe esikunxweme lwempuma ye-Australia. Imida yeQueensland emantla, iVictoria isemazantsi, kunye noMzantsi Australia ngasentshona. Unxweme lwalo lujikeleza uLwandle lweTasman ukuya empuma. Ingingqi yeAustralia Capital Territory sisibambiso ngaphakathi kurhulumente. Idolophu yaseburhulumenteni yaseNew South Wales yiSydney, ekwayidolophu enkulu yaseOstreliya. NgoDisemba 2018, abantu baseNew South Wales babengaphezulu kwesigidi se-8, beyenza ukuba ibe yeyona ndawo inabantu abaninzi eOstreliya. Ngaphantsi nje kwesibini kwisithathu sabemi beli lizwe, i-5.1 yezigidi, bahlala kwingingqi enkulu yaseSydney. Abemi baseNew South Wales babizwa ngokuba zii-New South Wales.I-Colony yase New South Wales yasekwa njengendawo yokohlwaya e-1788. Imvelaphi yayiquka ngaphezulu kwesiqingatha somhlaba omkhulu wase-Australia nomda wasentshona obekwe kwi-129th meridian empuma kwi-1825. Le koloni ikwabandakanya imimandla yesiqithi yeNew Zealand, iVan Diemen's Land, isiQithi seNkosi Howe, kunye neNorfolk Island. Ngexesha le-19th century, uninzi lwendawo ye-colony yahluthwa ukuze yakhe i-colonies yaseBritane eyahlukileyo eyagcina yaba yiNew Zealand kunye namazwe ahlukeneyo kunye nemimandla yase-Australia. Nangona kunjalo, i-Swan River Colony ayikaze ibhalwe njengenxalenye yeNew South Wales. I-Lord Howe Island ihlala iyinxalenye yeNew South Wales, ngelixa i-Norfolk Island iye yindawo yomdibaniselwano, njengeendawo ngoku ezaziwa njenge-Australia Capital Territory kunye neJervis Bay Territory.